I-Crypto-Anarchism: Isoftware Yamahhala Nezimali Zobuchwepheshe, Ikusasa? | Kusuka kuLinux
Ubuntu selokhu benziwa kanjalo, buye bagqama ngale kokuziphendukela kwemvelo kwezobuchwepheshe, ngakho-ke, intuthuko ehlukahlukene yezobuchwepheshe ibe nomthelela kwinqubekela phambili yomphakathi wesintu. Izinkulumo ezifana nokufunda, ukubhala, izibalo, ezolimo, abezindaba kanye ne-Information and Communication Technologies manje ziyizibonelo zokuthi intuthuko yezobuchwepheshe iyiguqula kanjani indlela esisebenzisana ngayo ngokuhweba, ubuciko nesayensi, uHulumeni Systems kanye namaPoles of Power.
Ngokulandelayo, ifilosofi yayiqukethwe futhi yamenyezelwa yiNtuthuko yeSoftware Emahhala nezinkulumo ezifanayo ezifana ne-Open Source, noma imiphumela yazo entuthukweni yamanje njenge-Cryptocurrencies ngaphansi kwesambulela seBlockchain Technology (Blockchain) ishintsha ngokuphelele indlela abantu emhlabeni wonke abahlangana ngayo futhi bahlanganyele, imvamisa ingaphandle kokulawulwa ohulumeni noma amandla ezomnotho.
1.1 Isoftware yamahhala yesimanjemanje
2 Ezezimali Zobuchwepheshe kanye ne-Cryptocurrensets
2.1 I-Blockchain ne-Distributed Accounting Technology (i-DLT)
2.2 Ama-cryptocurrensets kanye neMining Digital
2.3 Kepha kungani ama-Cryptocurrencies ephumelele kangaka?
3.2 Ingabe Uhulumeni We-Crypto-Anarchist Kungenzeka?
Okwamanje, Imboni Yokuthuthukiswa Kwesoftware futhi ikakhulukazi i-Free Software isunguliwe ngaphandle kokungabaza njengenye yezinkulumo ezibaluleke kakhulu kwezobuchwepheshe namasiko ezingeni lesakhamuzi esivamile emhlabeni jikelele, kugcizelelwa kakhulu amaphuzu athile akhethekile eplanethi.
Ukucabanga impilo yansuku zonke yanoma isiphi isakhamuzi ngaphandle kokusebenzisana nesoftware ethile cishe akunakwenzeka namuhla, noma okungenani umsebenzi othusayo ukubhekana nawo. Ayikho idivayisi, i-hardware noma ipulatifomu ebingasebenza ngaphandle kwesoftware efanelekile, ngoba ngaphandle kwale mishini besingakwazi ukuxhumana, ukuhambisa noma ukusebenza, njengoba senza namuhla. Isoftware iyithuluzi eliyisisekelo lokusebenza komphakathi wethu.
Isoftware yamahhala yesimanjemanje
Futhi ezingeni leSoftware yamahhala, le nkulumo inamandla amakhulu, ngoba yakha ithuba noma isidingo esibalulekile sokukwazi ukuhlala ngesizotha esimanjemanje ukuthi izikhathi eziningi kuba nemikhawulo ngenxa yezindleko, ukulinganiselwa kanye nobubi bokusetshenziswa kwe-Private Software, ikakhulukazi ezindaweni zomhlaba lapho abantu bengenawo amazinga anele emali engenayo noma ingcebo yokubasekela.
Noma lapho oHulumeni noma imikhakha ezimele izama ukubumba noma ukulawula uquqaba ngokusebenzisa isoftware ethile eletha, yamukele futhi / noma idayise idatha yethu ngokugunyazwa noma ngaphandle kokungena, ihlasela ubumfihlo bethu noma ilawule imibono yethu namaqiniso ethu.
Umphakathi wethu, ubuntu banamuhla, isakhamuzi esijwayelekile, kumele sikuqinisekise lokho njalo Inqubo yokuThuthukiswa kweSoftware igcina isimo sokuthi inani elikhulu kakhulu lesoftware lenziwa ngaphandle kwegunya lezamabhizinisi nelezentengiso, okungukuthi, zithuthukiswe ngazinye futhi ngokwazo.
Okungakwazi zivumelanise nenani elikhulu labantu abanekhono, kugcinwa isimo sokuthi sebenzisa i-software ngokukhululeka nganoma iyiphi injongo, futhi uqinisekise ukuthi ingakwazi ifundelwe ukuqonda ukuthi isebenza kanjani, ukuyithuthukisa futhi yabelane ngayo nawo wonke umuntu.
Kuleli qophelo kulapho i-Free Software ilingana kahle nenkululeko (imigomo) yayo emine (4) kule mfuneko ebaluleke kakhulu emphakathini wanamuhla. Masikhumbule ukuthi le nkululeko (4) yile:
Ezezimali Zobuchwepheshe kanye ne-Cryptocurrensets
Kanye Nokuthuthuka Kwamahhala Kwesoftware, kuleli shumi leminyaka elidlule umhlaba usubumbene ngokwedlulele, futhi imiphakathi isihlangane ngokwengeziwe ngokusebenzisa amathuluzi obuchwepheshe kanye nezwe ledijithali ngendlela echazayo, eqhubekayo neqhubekayo, futhi manje ngokusetshenziswa kwe Ubuchwepheshe beBlockchain ukunika impilo i-Cryptocurrency yokuqala ebizwa nge- «Bitcoin» iphazamise futhi yaguqula, futhi yaguqula imikhakha eyahlukahlukene yezepolitiki, yezenhlalo nezomnotho emhlabeni jikelele.
I-Blockchain ne-Distributed Accounting Technology (i-DLT)
IBlockchain and Distributed Accounting Technology (i-DLT), ngokuvamile, ibeka inguquko kwezinqubo ezindala zezezimali, ezomnotho kanye nezepolitiki nezenhlalo.; kuthathwa njengokubonisa okukhulu kwejubane, ukwenza izinto obala, ukuphepha nokucwaningwa kwamabhuku ezinhlelweni zamanje ezahlukahlukene nezingasasebenzi ezilawula imininingwane yedijithali ezindaweni ezinjengezempilo, ezemfundo, ezokuphepha, ezentengiselwano, ukuqinisekiswa kwemibhalo, noma ukhetho lababusi, phakathi kwabanye.
Isibonelo, maqondana nezinhlelo zokuvota, amathuluzi e-DLT angashintsha ngokuphelele iparadigm yendabuko yentando yeningi; ukuqinisa izakhiwo zevoti eliphephile, lamazwe onke, ngaphandle kokuphoqelelwa nokwamukela ukuthi kungenzeka kube nentando yeningi ngaphandle kwemingcele.
Ama-cryptocurrensets kanye neMining Digital
Futhi mayelana nokuhweba nokusetshenziswa kwama-Cryptocurrensets, amukelwa ngabantu abaningi nsuku zonke, ukuthi uma befika ezingeni lapho bamukelwa khona kakhulu, kungabeka imibuzo ngohlelo lwamanje lwamabhange., okuhlale kunikeza isithombe sokuthi unendlela ehlukumezayo yokuphatha nokusebenzisa imali yabantu, kungabalwa izinto eziningi ezingekho emthethweni (ukukhwabanisa, ukuqothuka) abavame ukungena kuzo.
Ngaphandle kokubala umphumela wenkululeko kanye nokuzimela kwezezimali kanye / noma kwezomnotho okungadalwa yiMigodi Yedijithali kuCitizen, ukwehlukanisa umkhakha omkhulu ekuncikeni nasekubhekeni umkhakha ozimele noma kahulumeni.
Kepha kungani ama-Cryptocurrencies ephumelele kangaka?
Impumelelo yama-Cryptocurrensets nobunye ubuchwepheshe obuhambisana nabo buvela ekwethembeni izakhamizi ezisebenzisana nazo ezikubeke kukho. Futhi lo mphumela noma owenziwe uhlelo lokuthembela ngokungangabazeki luvela eqinisweni lokuthi ukuze i-cryptocurrency iphumelele kumele ube yisoftware yamahhala.
Ngisho, ikhodi yomthombo yama-cryptocurrensets imvamisa ivulekile futhi imahhala, ngaleyo ndlela iqinisekisa ukuthi kungenzeka kube nokuhlolwa okuhlala njalo kusoftware ngakho-ke qinisekisa ukuthi izenzo zomgunyathi azenziwa nabo noma kuzingxenyekazi zabo zokusekela (iBlockchain / iBlockchain), okungeyona nje incwadi yokubalwa kwezimali esezingeni eliphansi lapho ukuthengiselana kuqoshwa esidlangalaleni noma okuyingxenye -public nalapho izilinganiso zingahlobene nabasebenzisi, kepha namakheli abalawulayo.
Enye ingxenye ebalulekile yalolu hlelo ukuthi lejaja eyi-blockchain, kugcinwa kukhompyutha ngayinye esebenzisa i-node ephelele, okwenza kube nzima ukuthi okwenziwe kutholakale kungamanga, okuhamba kubethelwe noma kubethelwe ngamazinga aphezulu okuphepha.
Futhi i-Crypto-Anarchism ingena kanjani kwi-Free Software ne-Cryptocurrencies?
Njengamanje i-Crypto-anarchism ingachazwa ngamagama aphakathi nendawo, ngoba kungumqondo osanda kwenziwa futhi uzivumelanisa nezinguquko zomhlaba jikelele, ezifana eyodwa muhlobo lwanamuhla lukahulumeni lokho akubuphiki ubungxiwankulu obukhona manje, kepha kunalokho kububona njengobubi obuyisisekelo obudingekayo besintu, okudingeka ukuthi weqe ukufeza ukusinda kwayo.
I-Crypto-anarchism yamukela / yamukela noma yimuphi umuntu wobusoshiyali, wobukhomanisi, ongxiwankulu, owentando yeningi, kwesokudla, maphakathi, kwesobunxele, Noma cishe noma yimuphi umkhuba phakathi ke, inqobo nje ngokusisekela kwenu endleleni yakho wokubona emhlabeni, ingabe kuyinkazimulo ukuba ucacise / ugcine Izwe / Izwe uHulumeni / Isiphathimandla salo livuleke ngokujulile, elenzelwe phezulu, elenzelwe abanye abantu, elivinjelwe futhi ele-autarkic.
I-Crypto-anarchism ikhuthaza izakhamizi ezikhululekile, ezizimele nezikhiqizayo kwezomnotho ngokusebenzisa ukukhuthazwa nokusetshenziswa kobuchwepheshe bomphakathi nobangasese, obukazwelonke nobamazwe omhlaba, ngokusekelwa kubuchwepheshe bezokwazisa nokuxhumana kanye namabhulokhi okuvimba (iBlockchain) ukuqinisekisa ukwethenjwa, ukuphepha, ukuthembeka, ukuqinisekiswa, isivinini nezinye izinzuzo kwiCitizen .
I-Cryptanarchism yakha imithetho enobulungisa futhi elinganiselayo kepha eqinile ngokweqile, ngenkathi inikeza izikhulu (amacala) osopolitiki ababuthaka ngokweqile, okungukuthi, ngaphandle kwamandla amakhulu kwezepolitiki, ezenhlalo nezomnotho namalungelo, ukugwema inkohlakalo noma ukuhlanganiswa kwamandla.
Ngamafuphi, i-Cryptoanarchism ithuthukisa, ithande futhi ithembele ekusetshenzisweni kweFree Software neFinTech ukuhlangabezana, nakho konke okulindelwe yiCitizen yanamuhla, okusho ukuthi, kuhlose ukwakha imodeli entsha ebuyela kumodeli endala engasasebenzi ngobuchwepheshe ukuze kuhlonishwe futhi kuqinisekiswe ngokuyikho nangokusobala amalungelo ezakhamizi, aqinisekise ukuphepha kwawo nobumfihlo bawo, kanye nokubonakaliswa kweqiniso kwezinqumo noma izenzo zabo ngamandla akhiwe.
Ingabe Uhulumeni We-Crypto-Anarchist Kungenzeka?
Futhi, uHulumeni we-Cryptoanarchist ngokususelwa ekusetshenzisweni okunamandla kwalobu buchwepheshe obubanzi bawo abukhawulelwanga endaweni, ingaluthola ngokushesha uzwelo lwesakhamuzi esiningi esinesifiso esikhulu sokuhlola ubuchwepheshe obusha kanye nokubamba iqhaza kumamodeli entando yeningi amasha, ikakhulu ngenxa yezimo ezingazinzi zenhlalo nezepolitiki nezomnotho lapho ezinye izizwe zizithola zikhona.
Ekuphetheni, i-Crypto-anarchism inesikhala esikhulu sokubonakala, emazweni amaningi lapho imiphakathi ingekho nje kuphela ngemuva kokufunwa kwezinqubo zentando yeningi eziphazamisayo nezisatshalaliswa, kodwa futhi unikele ngempilo egcwala embonweni womhlaba wonke nakusatshalalisiwe. Ikusasa lapho imingcele yemingcele ingahle ingabi khona futhi lapho umhlaba wonke uyinsimu yethu ngokulinganayo, lapho ama-digital kanye nama-cryptocurrensets angukuhleleka kosuku.
Uma ufuna ukufunda ezinye izindatshana ezifanayo mayelana Nezinzuzo zeSoftware Emahhala Kwezakhamizi ku-Blog yethu, chofoza kusixhumanisi esilandelayo: Intando yeningi.
Ekugcineni, uma ufuna ukwazi kabanzi nge-Crypto-anarchism, kunemibhalo eminingi ngakho kwi-Intanethi, kepha ungaqala ngalesi sixhumanisi: Inkululeko ye-Crypto. Futhi njengoba i-Cryptanarchism isuselwa ku-Anarchism, ngikushiya le vidiyo ukuze wephule noma iyiphi itabhu noma ukudideka ngalo mqondo!
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » eziningana » I-Crypto-Anarchism: Isoftware Yamahhala Nezimali Zobuchwepheshe, Ikusasa?
Kubukeka njenge-utopia okuyiminyaka elula ukuthi ibe yiqiniso.
Kungakho ekugcineni kwegama lencwadi kuthiwe: Ikusasa?
Ngamunye uzoba nesimo sakhe maqondana nalokhu ...
Kuyisihloko esithakazelisa kakhulu futhi esiyinkimbinkimbi engicabanga ukuthi sihle kakhulu ekufakweni kwebhulogi.
Kunginika ukungcola okuncane ukuhlanganisa izimpikiswano ezinegama le-anarchism nentando yeningi. Ngicabanga ukuthi lokhu kuhlobene nokuthi i-anarchism iyindlela kahulumeni (noma engekho kuhulumeni); mhlawumbe kwezinye izindawo, kune-crypto-anarchism, bekungaba ngcono ukusebenzisa i-crypto-punk, esondele kakhulu kodwa engagxili esimweni sikahulumeni uqobo, kepha kwimikhuba ezungeze i-cryptography.
Yebo, i-athikili enhle.
Ukuphawula okuhle kakhulu nokunikela, ikakhulukazi lapho kukhulunywa ngokunyakaza kwe-cryptopunk, engikushiye ngabomo kule ncwadi.
Futhi impela, zibalulekile kuyo yonke le nhlangano yokuzama ukuguqula umhlaba wokuqondisa ukuze kuzuze umuntu nesakhamuzi, ukufuna nokuqinisekisa ubumfihlo, ukuphepha nokungaziwa.
Ngingasho ukuthi ukuhlanganiswa kwe-Cryptopunk Movement kanye ne-Anarchist Movement kwavela nge-Crypto-anarchism, manje esethola umfutho namandla ngenxa yokusebenzisa ama-Cryptocurrensets.
Ngikushiya lesi sixhumanisi uma kwenzeka ufuna ukwazi okwengeziwe ngeCriptopunk Movement
Ukusekelwa kwe-TrueCrypt ne-veracrypt ku-Tails 3.9 kuzofika ngoSepthemba 5